Kitra amboaran’ny CAF :: Nandresy ny TS Galaxy Afrika Atsimo • AoRaha
Kitra amboaran’ny CAF Nandresy ny TS Galaxy Afrika Atsimo
Manana tombony amin’ny herijika hiatrehana ny dingana manaraka amin’ny fiadiana ny amboaran’ny Kaonfederasiona afrikana amin’ny taranja baolina kitra (CAF) andiany faha-17, ny TS Galaxy, avy any Afrika Atsimo. Hifandona amin’ny Cnaps Sport, izay mpandresy amin’ireo ekipa roa ireo amin’ny fihodinana faharoa.
Niondrika teo anatrehan’izy ireo tamin’ny isa 1 noho 0 ny ekipan’ny Saint-Louis Suns, avy any Seychelles, nandritra ny lalao mandroso tamin’ny alahady lasa teo, tany Afrika Atsimo. Na izany aza anefa dia mbola tsy very fanantenana ny solontena seiseloa. Mbola hampiantrano ny lalao miverina amin’ny alahady 25 aogositra ho avy izao izy ireo ka miankina betsaka amin’ny vokatra eo ny tohin’ny fifaninanana ho an’ny Saint-Louis Suns.
Isan’ireo klioba voafidy tsy niatrika ny savaranonando na ny fihodinana voalohany ny Cnaps Sport, laharana faharoa teo amin’ny fiadiana ny amboaran’i Madagasikara. Ny Cnaps Sport no hanafika any an-tanin’olona amin’ny lalao mandroso, amin’ny 13 – 15 septambra ho avy izao. Amin’ny 27 – 29 septambra kosa no hampiantrano ny lalao miverina, izay vinavinaina hatao eny amin’ny kianjan’i Vontovorona, ny Cnaps Sport.
Baolina kitre Pro League Manao fanamby amin’nyfandresena ny AS Jet Mada
Baolina kitra – COSAFA U20 Tsara fanombohana ny Barea tamin’i Lezôtô
Basket-ball ranomasimbe indiana Hiatrika ny lalao manasa-dalana ireo ekipa malagasy roa
Fanatanjahantena mekanika – «Rallye du Boeny» :: Fiarakodia telopolo hifanenjana any Mahajanga
Baolina kitra – « CAF champions league» :: Mafimafy ny miandry ny Fosa Juniors any Maorisy